Gonzalo Higuain, Harry Kane,Juventus, Man City & 7 Xog Oo Laga Diwaan Galiyay Kulamadii Xalay Ee Champions League – Kooxda.com
Home 2018 February Champions League, Ingiriiska, Italy, Wararka Maanta Gonzalo Higuain, Harry Kane,Juventus, Man City & 7 Xog Oo Laga Diwaan Galiyay Kulamadii Xalay Ee Champions League
Gonzalo Higuain, Harry Kane,Juventus, Man City & 7 Xog Oo Laga Diwaan Galiyay Kulamadii Xalay Ee Champions League
Kooxaha Man City iyo Tottenham ayaa min hal lug lasii galay wareega 8 dhamaadka tartanka champions league inkasta oo ay Man City si cad u xaqiiqsatay marka loo eego in ay 4 gool ku soo dhalisay meel ka baxsan garoonkeeda.
Tottenham ayaa iyaduna bar-baro 0/0 ah ama 1/1 ah ama guul ay ka gaarto kooxda Juventus ugu soo baxaysa wareega 8 dhamaadka maadama ay laba gool ku soo dhalisay meel ka baxsan garoonkeeda.
Kooxaha Premier league oo 5 kooxood ah ayaa u muuqda in ay iska xaadirin doonaan wareega 8 dhamaadka markii ugu horaysay muddo sanado ah inkasta oo wali la sugayo kooxaha kale ee Liverpool,Chelsea iyo Man United oo aan ciyaarayn kulamo fudud.
Hadaba waxa aan halkan ku soo bandhigaynaa 7 xog oo laga diwaan galiyay kulamadii xalay ee champions league ay la ciyaaray.
Gonzalo Higuain: Ka Hor labadii gool ee uu ka dhaliyay Gonzalo Higuain ayaa dhaliyay 4 gool 27 kulan oo wareega tooska loo hadho, waxana uu 9 daqiiqao laba gool uga dhaliyay kooxda Tottenham.
Harry Kane: Harry Kane ayaa ah xiddiga ugu badan ee England ka soo jeeda ee dhaliyay goolasha ugu badan ee xilli ciyaareed kaliya oo champions League isaga oo dhaliyay 7 gool isaga oo bar-bareeyay rikoor uu Steven Gerard dhigay isaga oo ahaa xiddiga kaliya ee England ee 7 gool ka dhaliya xilli ciyaareed kaliya.
Harry Kane: Kane ayaa dhaliyay goolasha ugu badan ee 9-kii kulan ee ugu horeeyay taariikhda champions league isaga oo dhaliyay 9 kulan waxana uu dhaafay xiddigaha Ronaldinho, Simone Inzaghi, Didier Drogba & Diego Costa kuwaas oo dhaliyay 8 gool.
Juventus: Kooxda Juventus ayaa laga dhaliyay 2 ggool 71-kii daqiiqo ee ugu horaysay, iyaga oo 1,450 daqiiqo laga dhaliyay kaliya 1 gool wakhtigaas oo ahaa bishii November.
Kevin De Bruyne: De Bruyne ayaa haatan caawiye ka noqday 19 gool oo tartamada oo dhan ah xilli ciyaareedkan waxana uu 5 caawin ka badan yahay xiddig kasta oo premier league ka ciyaara.
Man City: Kooxda Man City ayaa badisay 34 kulan oo xilli ciyaareedkan ah tartamada oo dhan iyada oo ka badan kulamadii ay xilli ciyaareedkii hore oo dhan badiyeen kuwaas oo badiyay 33 kulan.
Kyle Walker: Walker dhamaystiray 8 kubad ka qaadasho kulankii Basel waana xiddiga ugu badan ee sidaas sameeyay champions league xilli ciyaareedkan.
Filed in: Champions League, Ingiriiska, Italy, Wararka Maanta